साहित्य मनोरञ्जन – दाङ खबर
स्वास्थ्यको जग: विद्यालयमा नर्स (कविता)
मिलन घिमिरे काठमान्डौं साउन ३२ । स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्नेहरु सब समाज नै स्वास्थ्य बन्ने बाटो खोजौं अब को त्यो हो जसले, अब खबरदारी गर्छ स्वास्थ्य सन्देश चेतनाको सिपाही बनून् नर्स नबुझेरै समाजमा स्वास्थ्य सावधानी कतिवटा रोग त यसै लाग्दो रैुछ ताुनि व्याम के हो खाने के हो बुझी जीवनशैली चेतनाको स्तर माथि उठाउनु छ पैुली रोग लागेुसि उपचार गर्ने मात्र होइन सावधानी अपनाउनुस् भन्ने कोही छैन समाजलाई चेतनशील बनाउनुपर्छ यही काम पूरा गर्छन् विद्यालय नर्स कति धेरै खुसी, कति लाग्थ्यो हर्ष जतिखेर पायौं हाम्ले विद्यालय नर्स स्थानीय निकाय र विद्यालय पनि सबैलाई महसुस भो चाहिने रहेछ भनी स्कुलमा सररमिसले जस्तो सिकाउँछन् घरमा गई विद्यार्थीले त्यस्तै बुझाउँछन् विद्यार्थीको विश्वासमा पर्छ जुन कुरा त्यसपछि यस्तो कुरा गर्न खोज्छन् पूरा स्वस्थ जीवन सुखी जीवन आफ्नो ख्याल गरे धन भनेको
काठमाण्डौ साउन ३२ । वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको शनिबार निधन भएको छ । शनिबार बिहान डल्लुमा रहेको आफ्नै घरमा उहाँको निधन भएको हो । उहाँ केही समयदेखि दम रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो । २००३ सालमा काठमाण्डौको असनमा जन्मनुभएकी अधिकारीले थुप्रै नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको थियो । ६ वर्षको उमेरमा उहाँले नेवारी नाटक ‘कचिमचा’ अर्थात् ‘काँचो माटो’ बाट अभिनय यात्राको सुरुवात गर्नुभएको थियो । उहाँले अभिनय गरेका चर्चित चलचित्रहरुमा कन्यादान, चिनो, भाउजूलगायत छन् । खासगरी उहाँले ‘कन्यादान’ निभाएको भूमिकाका लागि धेरैले सम्झन्छन् । उहाँलाई शनिबार दिउँसो १ बजेपछि पशुपति आर्यघाटमा श्रद्धाञ्जली दिने र आजै अन्तिम संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षित रहेनन्
काठमाडौं साउन ३० । वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितको ९७ वर्षको उमेरमा आज (बिहीबार) बिहान निधन भएको छ। निमोनियाका कारण गत साता ललितपुरको सुमेरु अस्पतालमा भर्ना भएका दीक्षितलाई बुधबार ‘डिस्चार्च’ गरी आफ्नै निवास काठमाडौँको कालिकास्थान ल्याइएको थियो। निवासमा शौचालय जाँदा बेहोस भएका उनलाई पुतलीसडकस्थित हिमाल अस्पताल लगेपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। उनलाई मुटु, मिर्गौला र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या थियो। दीक्षितका ‘माधवी’, ‘ऋग्वेदः केही प्रमुख सूक्त’, ‘ग्यास च्याम्बरको मृत्यु’ लगायत ४६ कृति प्रकाशित छन्। उनले मदन पुरस्कार, साझा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारलगायत विभिन्न पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गरेका थिए। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि उनको विशिष्ट योगदान छ। उनको जन्म १९७९ फागुन ६ गते काठमाडौँको गौरीधारामा भएको थियो। उनका श्रीमती, तीन छोरा र एक छोरी छन्। उनका नाति अव
नेपाली चलचित्रका लागि भीएफएक्स ‘आकाशको फल’, मिनेटकै पर्छ पाँच लाख
नरेश फुयाँल काठमाडौं साउन २९। चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’मा सुरुको दृश्यमा अण्डा, लार्भा हुँदै पुलती भुरुरु उडेर जान्छ । चलचित्र ‘रोमियो एन्ड मुना’मा पनि एउटा दृश्य छ, पानीभित्र जेल छ । जेलभित्र सृष्टिका बुवा छन् । सृष्टि गएर तिनै बुवालाई भेट्छिन् । यी दुई चलचित्रका दुई दृश्य भीएफएक्स (भिजुअल इफेक्ट्स) मार्फत् बनाइएको थियो । ‘रोमियो एन्ड मुना’ भीएफएक्स दृश्यको लम्बाइ समय चारदेखि पाँच मिनेट छ । यसकै लागि निर्माताले करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए । “भीएफएक्स नेपालमा निकै महँगो छ । भीएफएक्स कम्पनी नै चलचित्रको प्रोड्युसिङमा पार्टनरसिपमा बस्यो भनेमात्रै हो, अन्यथा सहज छैन,” डाइङ क्यान्डलका निर्देशक नरेशकुमार केसी भन्छन्, “समय र बजेटका हिसाबले पनि नेपाली चलचित्रलाई भीएफएक्स प्रयोग गर्न कठिन छ ।” नरेशलाई आफ्नो चलचित्रको भीएफएक्सको ‘फिनिसिङ’मा पनि चित्त बुझेको छैन । चलचित्र ‘शत्रुगते’ को क्ला
गायिका एलिना चौहानको ‘तिम्रो खुसीमा’
काठमान्डौ साउन २७ । ‘इन्ष्टाको फोटो’ र ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ जस्ता गीतहरुको कभर गाएर चर्चामा आएकी गायिका एलिनाको चौहानको नयाँ गीत ‘तिम्रो खुसी’ म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक भएको छ । खुसी इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको ‘तिम्रो खुसीमा’का गीतकार तथा संगीतकार नृपेश उप्रेती हुन् भने संगीत संयोजन पुरुषोत्तम सुवेदीले गरेका छन् । बेलायतमा बसेर गीत गजल लेखनमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका उप्रेती संगीत भर्ने पनि गर्छन् । यस गीतमा उनले मेलोडी पक्षलाई विशेष ध्यान दिएर सुमधुर बनाउने प्रयास गरेका छन् । उप्रेतीद्वारा संगीतवद्व यसअघि ‘बरिलै’ बोलको गीत निकै मन पराइएको थियो । जसलाई नेपाल आइडल २ बाट चर्चित बनेका कृशल कँडेल र मीनराज पौडेलले गाएका थिए । यस गीतको म्युजिक भिडियोका निर्देशक हुन् शक्ति प्रज्वल घिमिरे । ‘तिम्रो खुसीमा’ को म्युजिक भिडियोमा नायिका श्रृचा थापा र मोडल सुदिप न्यौपाने रोमान्टिक
Aug102019 by DangkhabarNo Comments
बाँके साउन २५ । नेपालगंज सबैभन्दा रंगिन र जीवित सहर लाग्थ्यो । बाक्लो बजार, जता हेर्यो त्यतै झिलिमिली, जलेबी र विरयानीको मगमग सुगन्धले मनै लोभ्याउने । रिक्साको ताँती, तृङ तृङ आवाज, टाँगाको टक टक र छन्छन् गर्ने घोडाका पाइलाले मनमा बेग्लै ऊर्जा दिन्थ्यो । त्यसमाथि आजान र आरतीको मधुर आवजले स्वर्गकै आभास दिन्थ्यो । नेपालगंज मन्दिर र मस्जिदको संगम स्थल , एउटा कुनामा मन्दिर र अर्को कुनामा मस्जिद । अल्लाह र देवताको खुब जोडी जमेको थियोे । तालको बीचमा जुँगे महादेव, बीच बजारमा अल्लाह तालाको दरबारले एकअर्कालाई वर्षौदेखि इसारा गर्दै बसेका थिए । महादेव बिहानको चार बजे जाग्थे भने अल्लाह बेलुकी चारमा । सहरको गल्ली गल्लीमा राम राम र असलम वालेकुम आदानप्रदान हुन्थ्यो । त्रिभुवन चोकदेखि पूर्व , भेरी अञ्चल अस्पताल नपुग्दै लामो निलो रङ्गको घर थियो । कुनामा अलि अध्याँरो जिन्स रेडिमेड पसल अगाडि सुकिला कुर्ता
मन पर्ने हिराेइनलाई भेट्न खोज्दा फ्यानले गुमाए ६० लाख
एजेन्सी/मानिसले मनको रहर पूरा गर्न केसम्म गर्दैन? हरकुराको लागि तयार हुन्छन्। यसैको एक उदाहरण भारतमा भएको एउटा घटनालाई लिन सकिन्छ। एक व्यक्ति आफ्नो मन पर्ने सेलिब्रेटी भेट्ने रहर पूरा गर्न खोज्दा ठगिएका छन्। एक जना व्यक्ति जसको परिचय खुलाइएको छैन, बलिउड हिरोइन काजल अग्रवालका डाइहार्ट फ्यान रहेछन्। उनको यही फाइदा केही व्यक्तिले उठाएका हुन्। धोखाधडी गर्नेहरुले ती फ्यानबाट ६० लाख ठगेको एक अनलाइनले जनाएको छ। समाचारअनुसार रामनाथपुरका ती फ्यानले काजलसँग प्रत्यक्ष भेट्न पाउने आशामा ती व्यक्तिलाई ६० लाख भारु बुझाएका थिए। सुरुमा ५० हजार भारु तिरेका उनले पटक पटक गरी ६० लाख भारु ती व्यक्तिलाई बुझाएको बताइएको छ। यतिले मात्रै घटना टुंगिएन। उनीहरुले ती व्यक्तिलाई विभिन्न अब्सिन फोटोहरु अनलाइनमा लिक गरिदिने भन्दै डर देखाएका थिए। धेरैभन्दा धेरै पैसा असुलिन थालेपछि ती फ्यान डरले कोलकातामा लुकेर बसेका
Jul262019 by DangkhabarNo Comments
पक्राउ पुर्जीपछि छविराज र शिल्पा पाेखरेल भूमिगत
काठमाडौँ साउन १० । चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलविरुद्ध बहुविवाह प्रकरणमा प्रहरीबाट पक्राउ पुर्जी बुधबार जारी भएको थियो। सो पुर्जीपछि निर्माता ओझा र अभिनेत्री पोखरेल भूमिगत भएका छन्। यी दुईलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले बिहीबार सबैतिर सर्कुलर जारी गरेको छ। यतिबेला निर्माता छविराज काठमाडौंमै छन्। पोखरेल भने भोजुरी फिल्मको छायांकनका लागि धरानमा थिइन्। बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फिल्म छायांकन स्थलबाट शिल्पा पनि भुमिगत भएको छायांकन युनिटका एक व्यक्तिले बताएको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ। निर्माता छविराजको जेठी श्रीमती हेमाले छविराज र शिल्पाविरुछ गत आइतबार महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्।
मेरो गाउँमा ढोई पसेको छ रे !
सुन्छु आज भोलि मेरो गाउँ ठाउँमा ढोई पसेको छ रे । मत्ता हात्तीको लहर अगाडि पछाडि रोई बसेको छ रे ।। कसले कसको कान भर्छन् थाहाँ पत्तो छैन अचेल बस् । वरिपरि चर्चा एक नयाँ नबेली सबकी जोई बनेकी छ रे।। हावा नलागी हल्लिन्न पात खैं कस्तो कस्तो लाग्छ मात। युवा हैन बुढाहरु आजकल परस्त्री छोई बसेका छन् रे ।। बिग्रे बुढा नतमस्तक ढोईको पछि लागी रुँदैछन् बालबच्चा। सम्झी त्यो कालो दिनको नमिठो स्पर्शको खोई बस्छन् रे ।। सुन्छु आज भोलि मेरो गाउँ ठाउँमा ढोई पसेको छ रे । मत्ता हात्तीको लहर अगाडि पछाडि रोई बसेको छ रे ।। तुलसीपुर-६ गाेलाैरा, दाङ (हाल युएई)
Jul62019 by DangkhabarNo Comments
ऊ अजीवकी थिई । अर्को धरातलमा हुर्किएकी हो जस्तो लाग्ने । हातभरि राता चुरा । लामा कुर्ता सुरुवात । बाङ्गो सिउँदो । एक चुल्ठी कपाल । पटपटी फुटेका कुर्कुच्चा । ठूलो पावरदार चस्मा । यो उसको हुलुया । सधैँ यस्तै देखेँ–उसलाई । फुटेका कुर्कुच्चा ढाक्न छोटो सुरुवाल तानेर लामो बनाउने प्रयासमा जुट्थी । औषत राम्री देखिने ऊ ३५ वर्षकी थिई । यही अनुमान छ मेरो । पाठक ! म गगन शर्मा । पेशाले लेखक । छतमा बसेर ब्रस गर्दैगर्दा देखेको उसलाई । अहिले नि उस्तै लाग्छे ऊ । कुर्सीमा बसेर घाम ताप्दै गरेकी देखिई ऊ–हिजोदेखि आजसम्म । उसको अन्य वितरण नि चाहियो हैन । मैले भन्नैपर्छ–यो सब । भनिनँ भने म दोषी ठहरिन्छु । ऊ मलाई मनपर्ने काम गर्छे । म फूल मन पराउँछु–उसको काम भनेकै फूल गोड्नु हो । उसको दैनिक रुटिन–घाम ताप्नु । फूल गोड्नु अनि गमलामा पानी हाल्नु । उसले गर्ने काम यत्ति हो । आफ्नो काममा अभ्यस्त थिई–ऊ